भीडमा हुने झण्झट छोडी Digipay बाट काट्नुहोस EPL को टिकट। (तर काटेपछि कसरी गर्ने प्रयोग? ) Letzcricket - Serving Nepali Cricket
भीडमा हुने झण्झट छोडी Digipay बाट काट्नुहोस EPL को टिकट। (तर काटेपछि कसरी गर्ने प्रयोग? )
3rd December 2018, Monday
क्रिकेटको मजा लिन अबको दुई हप्ता किर्तीपुर मैदान जांदै हुनुहुन्छ? यदी TVS EPL हेर्न जांदैहुनुहुन्छ भने केही कुरा ख्याल गर्नुस। एक त टिकट काट्न भीड, लाईनमा बस्ने, टिकट काट्ने, टिकट बुझाउन लाईनमा बस्ने अनि टिकट देखाएर भित्र छिर्ने। यी सबै झण्झटबाट मुक्त हुनुहोस Digipay app बाट टिकट काटेर। अझ २ टिकट काट्दा अर्को १ टिकट सित्तैमा समेत पाईने। यदी टिकट कसरी काट्ने भनेर जान्नु भएको छैन भने यहां पढ्नुहोस।
टिकट त काटियो, अब डिजिटल टिकटको प्रयोग कसरी गर्ने?
टिकट काटेपछि App को My Tickets अप्सनमा गएर आफ्नो टिकट कन्फर्म गर्ने। टिकट प्रयोग गर्नका लागि, आफ्नो Purchased Ticket लिस्ट भित्र रहेको टिकटको छेउमा Scan for Entry लाई क्लिक गरी डिजिपे काउन्टरमा अथवा वरीपरी रहेको कोड स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसबाट यहांले अर्को QR कोड पाउनुहुनेछ जसलाई टिकट कलेक्टरले पुन: scan गरी verify गर्नेछन्। यसलाई Double Authorization system भनिन्छ जुन टिकट जांच गर्नका लागि प्रयोग हुने यस सिस्टम सम्भवत संसारमै पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याईएको मानिएको छ। यसरी टिकट कलेक्टरले verify गरिसकेपछि मात्र भित्र म्याच हेर्न जान पाउनुहुनेछ।
Digipay बाट टिकट त किन्नुभो तर EPL हेर्न जान भ्याउनु भएन, अब के गर्ने?
यदी यस्तो हो भने, तपाईंले आफ्नो टिकट डिजिपे याप भएको तर टिकट किन्न नभ्याएको साथीलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। डिजिपे टिकटको छेउमा ट्रान्सफर गर्ने अप्सन पनि राखिएको छ। तर टिकटको प्रयोग भने सोही दिन गर्नुपर्नेछ।